Meesha ugu haboon fasaxa xiga, xeebta ama buurta | Ragga Stylish
Maxaa la doortaa? Xeeb ama buur? Meesha ugu habboon ee ciidahaaga
Waxaa jira siyaabo badan oo aad ku qaadan karto fasax madadaalo leh, laakiin adduunku wuxuu u qaybsan yahay laba nooc oo dad ah: kuwa doorbida inay ku qubeystaan ​​xeebta iyo kuwa jecel buuraha. Qaarkood waxay jecel yihiin kuleylka, biyaha iyo qorraxda, halka qaar kalena ay ka codsadaan qabowga iyo joogga inay la qabsadaan.
Haddaynu si dhab ah u eegno labada goobood, xeeb ama buur ... Waa kee ikhtiyaarka ugu fiican?
Sida laga soo xigtay daraasado la sameeyay, biyaha iyo badda ayaa lagama maarmaan u ah abuurista xaaladaha ugu wanaagsan ee nasashada iyo nasashada. Si kastaba ha noqotee, tani macnaheedu maaha in xeebta ay ku guuleysatay dagaalka. Waxaa laga yaabaa in dadka loo bartay kululaynta iyo cimilada qabow ay u arkaan qabowga buuraleyda inuu yahay khibrad ka duwan tii hore.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaad u baahan tahay inaad ogaato ayaa ah faa iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka labada deegaan iyo waxtarkooda muddadeenna fasax.
1 Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka xeebta
2 Wanaagga iyo xumaanta buurta
Faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka xeebta
Baddu waxay leedahay jawi wanaagsan oo aan ku socon karno dharka fudud oo ku raaxee waxyaalaha yaabka leh ee biyaha cusbada ku jira. Ayaa leh tanano cad oo maqaar ah. Waad dabaalan kartaa maalintii iyo xafladdii habeenkii, taas oo ku siinaysa fursado badan oo raaxo leh.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira kuwa aan u dulqaadan qorraxda ama biyaha cusbada leh. Kuwa neceb dareenka ciidda qoyan ayaa hubaal doorbida kireystaan ​​qol ku yaal dhul buuraley ah.
Wanaagga iyo xumaanta buurta
Beddelka badda, marwalba way soo ifbaxday buurta qabow iyo aamusan. Halkaas waxaad kaga badbaadi kartaa kuleylka iyo buuqa magaalada, taas oo dad badan u raaxeysa. Meelahan waxaad ku raaxeysan doontaa a gastronomy oo leh alaab lagu kori karo oo kaliya heerkulka hooseeya. Fuulista farduhu waxay noqon doontaa waxqabad xiiso leh.
Waxaad ogaan doontaa inaysan sahlaneyn in lagu dhaqmo ciyaaraha qabowsabab u ah khatarteeda heerka sare iyo qiimaha agabyada lagama maarmaanka ah. Sidoo kale, qof kastaa uma goyo cimilada qabow. Dadka kale xitaa way ku caajisi lahaayeen aamusnaanta.
In kasta oo ay jiraan wanaag iyo waxyeellooyin, xeebta iyo buuraha labaduba waa xulashooyin aad u fiican. Keebaad dooran doontaa?
Ilaha sawirka: Joya Life / Unifem
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Maxaa la doortaa? Xeeb ama buur? Meesha ugu habboon ee ciidahaaga
Shanta qaybood ee lagama maarmaanka u ah xagaagan
Saddexda dariiqo ee xagaaga ugu badan ee loo xirto jaakad